Diyaarad Dagaal Oo Lagu Soo Riday Dalka Afghanistan. – Bogga Calamada.com
Diyaarad Dagaal Oo Lagu Soo Riday Dalka Afghanistan.
January 6, 2018 10:07 am Views: 117
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah dalkaasi lagu soo riday diyaarad dagaal taasi oo faahfaahin laga helayo qaabka loo soo riday.
Ciidamada Ilaalada iyo difaacidda Hawada ee Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa dhulka soo dhigay diyaarad dagaal nooca Elecobtarka ah taasi uu lahaa maamulka daba dhilifka Kaabu ee Kabo qaadka u ah ciidamada Saliibiyadda Mareykanka ee duulaanka ku jooga dalkaasi.
Ciidamada Mujaahidiinta Dhaalibaan waxey diyaaradan dagaal kusoo rideen deegaan ka tirsan Gobalka Nimruz oo ah gobal dhaca Konfurta fog ee dalka Afghanistan,weerarka lagu soo riday diyaaraddan ayaa qeyb ka ah howlgalka Almansuuriyah ee sida tooska ah kaga socda gobalada dalka Afghanistan.
War qoraal ah oo kasoo baxay Imaarada Islaamiga ayaa lagu xaqiijiyay in gabi ahaan ay burburtay diyaarada ayna wada dhinteen xubnihii iyo askartii maamulka daba dhilifka Kaabul ee la socday diyaaradaasi.